Ndị na-emepụta ihe na - emepụta ihe na - ebugharị - Simplelọ Ọrụ Mgbanwe Dị Mfe nke China
ES420-26P-POE bụ Gigabit jisiri ike PoE Ethernet mgba ọkụ ngwaahịa mepụtara site DCN, na-enye 24 10/100 / 1000Mbps RJ45 na 2 Gigabit SFP ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla na-akwado ọrụ MDI / MDI akpaka, ma nwee ike nweta ntụgharị ọsọ ọsọ. All ọdụ ụgbọ mmiri 24 na-akwado ọrụ PoE nke na-agbaso ọkọlọtọ IEEE 802.3at ma na-agakọ na 802.3af. Enwere ike iji ES420-26P-POE dị ka akụrụngwa na-enye ike, yana nwere ike ịchọpụta ma chọpụta ngwa ọrụ nwere ike nke na-ezute ọkọlọtọ ma nyefee ...
ES420-10P-POE L2 Mfe Njikwa PoE Gbanye
ES420-10P-POE nwere ike inye 8 * 10/100 / 1000M akpaaka MDI / MDIX gbakwunyere 2 * SFP ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere ike ịghọta ọsọ ọsọ ọsọ. Ọ bụ ngbanwe nke njikwa ntanetị zuru ezu nke Gigabit Layer 2 nke emebere iji bulie mkpa nke ịnweta netwọk Gigabit dị elu, dị ka WIFI AP, igwefoto IP, ekwentị IP na ụdị akụrụngwa ndị ọzọ. O nwere ọdụ ụgbọ mmiri Gigabit RJ45 8 zuru ezu, ma nwee ike ịnye oke dị ka atụmatụ QoS, ọrụ VLAN bara ụba yana njikwa na ndozi dị mfe, njirimara niile m ...